Tubi TV कसरी सक्रिय गर्ने - Tubi.tv/Acttivate (दर्ता) - मनोरञ्जन
स्ट्रिम गर्ने अनुप्रयोगहरू उत्तम सामग्री र प्रयोगकर्ता अनुभव प्रदान गर्न स्थिर लडाईमा छन्। यद्यपि, तिनीहरू मध्ये अधिकांशको एक छुट्टै सेवा छ जुन प्रामाणिक टिभीको नक्कल गर्दैन। केबल टिभी बिस्तारै घट्दैछ, तर केहि कम्पनीहरू अझै तपाईंलाई टिभी-जस्तो अनुभव प्रदान गर्नमा काम गरिरहेका छन्।
टिभीलाई तपाईंको स्मार्ट उपकरणहरूमा ल्याउनका लागि, Tubi TV उल्लेखनीय प्लेटफर्महरू मध्ये एक हो। कुनै सदस्यता बिना, तपाईं असंख्य टिभी कार्यक्रम र चलचित्रहरू स्ट्रिम गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं अझै टेलिभिजन सेट जस्ता विज्ञापनहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ। जे होस्, तपाईंको स्ट्रिम भएको सामग्रीमा तपाईंसँग पूरा नियन्त्रण छ। तथापि, सामग्री स्ट्रिमिंगमा कुनै समयसीमा छैन।
अधिक महत्त्वपूर्ण, यो सबै नि: शुल्क हो! त्यसो भए तपाईं कसरी Tubi TV प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ? यो एक सीधा प्रक्रिया हो! Tubi TV के हो हेरौं र कसरी तपाईं यसलाई उत्तम अनुभवको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ:
Tubi TV के हो?
Tubi TV Fox बाट एक अनुप्रयोग हो जुन तपाईं आफ्नो फोनमा प्रामाणिकता र केबल टिभी को फुर्सत ल्याउँछ। यसको मतलब के हो? जबकि अन्य कम्पनीहरूले अनुप्रयोगहरू प्रदान गर्नमा काम गरिरहेका छन् जसलाई 'अनुप्रयोगहरू' जस्तै लाग्छ, 'तुबी टिभी तपाईंको फोनमा टिभी जस्तो महसुस गर्दछ।
अन्य प्रदायकहरूले सदस्यता शुल्कको साथ सामग्री प्रदान गर्ने कार्य गर्दछन्। सामूहिक रूपमा, यसले धेरै खर्च गर्न सक्दछ। जे होस्, TubiTV एकल हब हो कि टिभी कार्यक्रम र चलचित्र को एक विशाल संग्रह छ। सबै भन्दा राम्रो समाचार? सबै सामग्री नि: शुल्क उपलब्ध छन्।
तूबी टिभीले के प्रस्ताव गर्दछ?
Tubi सँग एक प्रयोग गर्न सजिलो ईन्टरफेस छ कि अनुप्रयोग खोल्न वा Tubitv.com मा गएर, तपाईं 'हेर्न सुरू गर्नुहोस्' मा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र तुरून्तै अनुप्रयोग स्ट्रिम गर्न सुरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ २०,००० भन्दा बढि चलचित्रहरू र टिभी श्रृंखलाहरूको संग्रह छ जुन तपाईं सित्तैमा स्ट्रिम गर्न सक्नुहुनेछ। केवल टिभी कार्यक्रम र चलचित्रहरू मात्र होइन, तपाईं लोकप्रिय कार्टुनहरूमा पनि पहुँच प्राप्त गर्नुहुनेछ।
यसले धेरै प्रतिष्ठित उत्पादन कम्पनीहरूसँग प्यारामाउन्ट, एमजीएम, वार्नर ब्रदर्स, र लायन्सगेटको साथ साझेदारी गरी तपाईलाई मूल र प्रीमियम सामग्री निःशुल्क ल्याउँछ। तर प्रश्न यो छ, कसरी यो तपाईं लाई यस सामग्री लाई नि: शुल्क ल्याउँछ?
Tubi TV मा विज्ञापन - यहाँ सदस्यता छ?
तपाइँलाई नि: शुल्क सामग्री ल्याउन, Tubi TV प्रसारण विज्ञापन। त्यस्तै उनीहरूले अन्य प्रदायकहरूसँग साझेदारी गर्छन् र सामग्री उपलब्ध गराउन भुक्तान गर्छन्। तसर्थ, Tubi TV एक कानूनी प्लेटफर्म हो कि तपाईं कुनै पनि उपकरणमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र कुनै कानुनी चिन्ता बिना स्ट्रिम गर्न सक्नुहुनेछ।
दुर्भाग्यवस, सामग्री पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र राख्न र एक नाफामुखी कम्पनी बन्नको लागि, तूबीले सदस्यता प्रदान गर्दैन। अर्को शब्दमा, त्यहाँ मासिक वा वार्षिक प्याकेज छैन जुन तपाईं Tubi बाट खरीद गर्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ, तपाईं विज्ञापन निष्क्रिय गर्न सक्नुहुन्न।
छोटकरीमा, विज्ञापनहरू भनेको सामग्री निःशुल्क र कानुनी राख्दैछ।
Tubi TV को अनुकूलता:
Tubi लगभग सबै प्लेटफर्ममा उपलब्ध छ। तपाईं यसलाई स्मार्टफोन र ट्याब्लेटहरूमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसले Android, IOS, र Roku समर्थन गर्दछ। तपाईं पीसी वा अन्य उपकरणहरूमा सामग्री स्ट्रिम गर्न सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईको स्मार्ट टिभी अनुप्रयोगसँग काम गर्दछ। त्यो सबै होइन! यदि तपाईंसँग गेमि con कन्सोल छ भने, तपाईं यसलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
समग्रमा, तूबी सर्वव्यापी अनुकूल छ र तपाइँलाई डाउनलोड को सजिलो ल्याउँछ। यो सबै प्रचलित अनलाइन स्टोरहरूमा उपलब्ध छ जस्तै गुगल प्लेस्टोर, एप्पल स्टोर, र सामसु Store स्टोर। यदि होईन भने, तपाईं यसलाई आधिकारिक वेबसाइटमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै, कुनै उपकरण बिना नै यो तपाईंको वेब ब्राउजरमा ठीक काम गर्दछ।
Tubi TV कसरी प्रयोग गर्ने?
Tubi TV प्रयोग गर्न, तपाईं भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ https://tubitv.com/ वा आधिकारिक अनलाइन स्टोरबाट अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्। यहाँ फलो-थ्रु गाइड छ:
ब्राउजरमा अनुप्रयोग वा वेबसाइट खोल्नुहोस्
'हेर्न सुरू गर्नुहोस्' मा क्लिक गर्नुहोस्, र यसले तपाईंलाई पुस्तकालयमा लैजान्छ
त्यहाँ तपाईंसँग ब्राउजि option विकल्प छ, खोजी गर्न, दर्ता गर्न र साइन इन गर्न
तपाईं साईन ईन नगरी सामग्री स्ट्रिम गर्न सक्नुहुनेछ केवल टिभी श्रृ Movies्खला वा चलचित्रहरूको थम्बनेलमा क्लिक गरेर यो लोड हुने बित्तिकै
इन्टरफेसले तपाइँलाई TV मा प्लेयर Chromecast लाई विकल्प प्रदान गर्दछ र त्यहाँ हेर्छ।
तपाईं पनि उपशीर्षकहरू र भिडियोको गुणवत्ता चयन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ HD सामग्री नि: शुल्क उपलब्ध छ।
यदि तपाईं निजीकृत सेवाहरू चाहानुहुन्छ भने, त्यसो भए दर्ता उत्तम विकल्प हो।
Tubi TV मा कसरी दर्ता गर्ने?
Tubi TV मा दर्ता गर्न सजिलो छ। यी साधारण चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्:
त्यहाँ अनुप्रयोगको शीर्ष दायाँ कुनामा एक दर्ता विकल्प छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्।
तपाईं गुगल वा फेसबुक प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ स्वचालित रूपमा दर्ता र लग इन गर्नका लागि
वैकल्पिक रूपमा, तपाईं विवरणहरू भर्नुहोस् र म्यानुअल विधिहरूको प्रयोग गरेर दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ
एकचोटि तपाईंले जानकारी भर्नुभयो र दर्ता गर्नुभयो भने, तपाईं दर्ता गरिएको सदस्य हुनुहुनेछ
त्यसो भए तपाईले इ-मेल र पासवर्ड प्रयोग गरेर साईन ईन गर्न सक्नुहुनेछ
तपाईंको उपकरणमा Tubi TV सक्रिय गर्नका लागि चरणहरू:
तपाईको उपकरणमा Tubi TV सक्रिय गर्न तपाईले लगइन गर्नुपर्दैन। जे होस्, यदि तपाईं आफ्नो टिभीमा Tubi TV स्ट्रिम गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं दुई-चरण एक्टिभेसनलाई अनुसरण गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईंको TV मा Tubi TV अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्
अनुप्रयोग खोल्नुहोस् र घरमा क्लिक गर्नुहोस्
घरबाट, साइन इन मा क्लिक गर्नुहोस्
टिभीमा अनुप्रयोगले एक सक्रियता कोड प्रदर्शन गर्दछ
सक्रियता कोड सहि टाइप गर्नुहोस्
Tubi TV कुनै समस्या बिना सक्रिय हुन्छ
Viola! तपाईंले साइन-इन प्रक्रियासँग गर्नुभयो। अब तपाइँ तपाइँको TV मा कुनै समस्या बिना स्ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ।
Tubi TV मा उपलब्ध सामग्री प्रामाणिक र व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गरिएको छ। विश्वभरि २ 25 करोड भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरू छन्। २ over भन्दा बढी उपकरणहरूमा समर्थन र कम से कम डुप्लिकेसन क्षमताको साथ, तपाईंसँग तपाईंको डिस्पोजेन्टमा पूर्ण-मनोरंजन मनोरञ्जन प्लेटफर्म छ।
यदि तपाईं बहु सदस्यता वा केबल टिभीमा अधिक खर्च गर्न चाहनुहुन्न भने, तपाईं Tubi TV अनुप्रयोग प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। जे होस्, यसले तपाईंलाई भर्खरको सामग्री प्रदान गर्दैन। अधिकांश सामग्री मूल मनोरन्जनको लागि हो। अन्य सेवा प्रदायकसँग उनीहरूको अनुप्रयोगहरू भएको रूपमा, भर्खरको श्रृंखला र चलचित्रहरू पहुँच गर्न तपाईंले उनीहरूको सदस्यता लिनुपर्नेछ।
अनलाइन स्ट्रिमि apps अनुप्रयोगहरूको दौडमा, Tubi TV एक अलग कोठामा खडा छ। यस जस्तो धेरै अनुप्रयोगहरू छैनन्। तसर्थ, यो तपाइँको स to्ग्रहमा एक मूल्यवान थप हुन सक्छ। न्यूनतम इन्टरफेस र सीधा दृष्टिकोणको साथ, यो पनि कम टेक-सेभियल व्यक्तिहरूका लागि उत्कृष्ट जोड हो।
२०२० मा नि: शुल्क रोबक्स कसरी पाउने?
अनलाइन अनलाइन फिल्महरू हेर्नको लागि १० उत्तम साइटहरू
मेरो नेटफ्लिक्स नि: शुल्क परीक्षण कहिले समाप्त हुन्छ
डाउनलोड वा साइन अप नगरी टिभी अनलाइन निःशुल्क कार्यक्रमहरू हेर्नुहोस्
अँध्यारो रोबलोक्समा हत्या
विन्डोजहरूको लागि एन्ड्रोइड अनुप्रयोग प्लेयर
एक्सबक्समा कसरी डिस्कनेड जडान गर्ने
विन्डोजहरूको लागि अन्तिम कट प्रो विकल्प